दुईवटा एन्ड्रोइड स्मार्टफोन बीच फाईलहरू कसरी साझेदारी गर्ने? जान्नुहोस् सरल तरिका... - Technology Khabar
» दुईवटा एन्ड्रोइड स्मार्टफोन बीच फाईलहरू कसरी साझेदारी गर्ने? जान्नुहोस् सरल तरिका…
एप्पलले प्रयोगकर्ताहरूलाई एयरड्रपको सहयोगमा एक आईफोनबाट अर्कोमा फाइलहरू साझेदारी गर्न अनुमति दिएझैं गुगलले पनि एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरूको लागि आफ्नै एयरड्रप संस्करण प्रस्तुत गर्‍यो, जसको नाम हो नियरबाई सेयर (Nearby Share)।
यो सुविधा गुगलले २०१९ मा प्रस्तुत गरेको थियो, तथापि, आज पनि धेरै जसो एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरू यस सुविधाका बारे अनजान छन् र एन्ड्रोइड फोनबाट अर्को एन्ड्रोइड फोनमा फाईलहरू साझा गर्न तिनीहरूले तेस्रो पार्टी एपहरू प्रयोग गर्दछन् । त्यहाँ तेस्रो पक्ष एप्ससँग डाटा सुरक्षाको बारेमा सधैं एक चिन्ता हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा एन्ड्रोइड फोनमा नियरबाई सेयरले तपाईंलाई यस चिन्ताबाट मुक्त राख्नका लागि काम गर्दछ। नियरबाई सेयर सुविधाको माध्यमबाट, तपाईं सजिलैसँग फाइलहरू एउटा एन्ड्रोइडबाट अर्कोमा साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईँले अहिलेसम्म यो सुविधा प्रयोग गर्नुभएको छैन भने, तुरून्त तपाईँको फोनमा भएको तेस्रो पार्टी सेयर गर्ने एपलाई अनस्टल गर्नुहोस् र तल उल्लेखित चरणहरू अनुसरण गरेर नियरबाई सेयरको फाइदा लिनुहोस्।
नियरबाई सेयर सुविधा एन्ड्रोइड ६.० वा त्यसभन्दा माथिको एन्ड्रोइड संस्करणको साथ आउँदछ। अहिलेसम्म यो सुविधा सबैको फोनमा अवस्थित छ।
यदि तपाईंले अहिले सम्म यो सुविधा प्रयोग गर्नुभएको छैन भने, सबैभन्दा पहिला यो थाहा पाउनुहोस कि यो तपाईँको एन्ड्रोइड फोनमा कहाँ अवस्थित हुन्छ।
– सबैभन्दा पहिले सेटिङ्गसमा जानुहोस् र स्क्रोल गरेर गुगल चयन गर्नुहोस्।
– यस पछि, डिभाइस कनेक्सन्समा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँले यहाँ स्क्रोल गरेर नियरबाई सेयर विकल्प पाउनुहुनेछ।
– अब नियरबाई सेयरमा ट्याप गर्नुहोस्, त्यसपछि सेटिङ्गसलाई अनुकूलित गर्नुहोस्।
– तपाईं यसलाई खोल्न वा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुविधा प्रयोग गर्नका लागि तपाईंले आफ्नो उपकरणको नामका साथसाथै गुगल एकाउन्ट छनौट गर्नुपर्नेछ।
नियरबाई सेयर: फाईलहरू कसरी प्रयोग र स्थानान्तरण गर्ने
– तपाईं साझेदारी गर्न चाहानुभएको फाइलमा सबैभन्दा पहिले ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि सेयर आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्।
– अब तपाईंले नियरबाई सेयर विकल्पमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। यस पछि, तपाईंको फोनले नजिकको उपकरणलाई खोजी गर्न सुरू गर्दछ।
– निश्चित गर्नुहोस् कि जुन फोनमा तपाईं फाईल सेयर गर्न चाहानुहुन्छ, उनीहरूको त्यस फोनमा पनि नियरबाई सेयर सुविधा अन छ ।
– फोन पत्ता लगाएपछि तपाईले त्यो फोनको नाममा ट्याप गर्नुपर्नेछ। उही समयमा, रिसीभरले फाइल पनि स्वीकार्नुपर्नेछ।
– यस पछि मात्र, फाइल साझेदारी सुरू हुनेछ र केहि समयमा नै प्रक्रिया छोटो समयमा पूर्ण हुनेछ।